mardi, 14 septembre 2021 19:53
Andranomanalina : Manomboka manatsara ny fomba fiasa
Manomboka manatsara ny fomba fiasa ireo kaomity ao amin'ny fokontany Andranomanalina Isotry, izay tarihan'ny filoham-pokontany vaovao Fetra Panoel Andriatsitoara. Ny tanjona dia ny fialana amin'ny gaboraraka sy ny kolikoly misy teto amin'ity fokontany ity izay nahitana lesoka be mihoam-papana hoy ny filoham-pokontany Fetra Panoel. Misy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa, toy ny fanomezana rosia hoan'ireo maka taratasy ilaina rehetra, izay tsy nisy hatramin'izay. Eo ihany koa ny asa fanadiovana ny tanàna. Hitohy ary hiroso hatrany amin'ny mangarahara tanteraka ny fitantanana ity fokontany Andranomanalina Isotry ity hoy hatrany ny filoha mpitantana. Notanterahina tamin'ny zoma 10 Septambra 2021 teo ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pokontany vaovao sy ny teo aloha. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 13 septembre 2021 20:06
Sary : MPEB
Faux-cap Androy : Trozona hita faty nifandrombahan'ny mponina
Nahitana trozona efa maty tao amoron’i Faux-cap ny sabotsy 11 septambra 2021 teo. Manoloana ity tranga dia nandray andraikitra avy hatrany ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga tamin'ny alalan'ny sampandraharaham-paritra Androy amin’ny fandraràna ny mponina mba tsy ihinana ny henan’ny trozona sy ny menaka azo avy aminy. Izany dia niarahana tamin’ireo manam-pahefana tany an-toerana sy ny lehiben’ny firaisan’ny fikambanan’ny mpanjono. Amin’izao fotoana izao dia efa milamina ny toe-draharaha. (Jereo Sary Tohiny)
Fakana an-keriny : Sarona ireo mpanao ratsy rehefa niriaria nandritra ny 7 volana
Nahitam-bokany ny ezaky ny mpitandro filaminana momba ny resaka fakana an-keriny tao Antsirabe, rehefa nokarohina nandritra ny 7 volana ireo mpanao ratsy. Taorian’ny 05 septambra lasa teo mantsy dia nanomboka hita ny nisy ireo olon-dratsy nanao izany. Raha ny fanazavana nentin’ny Kaomisera Andriamampiononna Ramaromanompo Romule, dia ny 25 Martsa 2021 no nisy naka an-keriny ny zazavavy iray atao hoe Maminirina Charline, ary tsy hita izy nanomboka teo. Ny 31 Martsa 2021 dia nisy olona nitaky vola 10 tapitrisa Ariary tamin’ny fianakaviany. Norahonan'ireo olon-dratsy hovonoina ilay zazavavy raha tsy manome io vola io ny ray aman-dreniny. Tsy nisy moa ny vola ka novonoin’ireo olon-dratsy ilay zazavavy, ary teny Andranomanelatra no nahitana ny faty efa votetitetika ny 04 Aprily 2021.
vendredi, 10 septembre 2021 13:38
Amborovy Belinta : Niantso vonjy tsy nisy namaly
May io alakamisy hifoha ny zoma 10 septambra ny trano iray tao Amborovy Belinta Mahajanga, niezaka niantso ny mpamonjy voina, fa tsy nisy mamaly. Ny teo amin'ny manodidina no nifanome tanana namonoana ny afo izay nijoalajoala tokoa. May tsy nisy noraisina ny entana maro sy ny trano 2. Tsy nisy naratra, tsy nisy aina nafoy.Mbola tsy fantatra ny nahatonga ny firehetan'ny afo. Tezitra ny mponina manodidina, inona izany no ilana ilay Appel Urgence, ary rehefa restaurant vahiny no misy voina dia malaky tonga ny pompier, hoy hatrany izy ireo maneho ny alahelony.
vendredi, 10 septembre 2021 11:10
Tsarahasina - Port-Bergé : Olona aman-jatony no tsy manan-kialofana vokatry ny haintrano
Noravaravain’ny afo ny Fokontany Miadana, Kaominina Tsarahasina, Distrikan’i Port-Bergé ny sabotsy 04 septambra lasa teo. Afo niainga avy tamin'ny tokantrano iray no nihavian’ny loza, tokony mitatao vovonana. Olona nikarakara nahandro.Tsy voafehy ny môtro (afo) ka niitatra. Ny andro koa somary nisy rivotra. Araka ny loharanom-baovao dia 177 ny isan'ny trano may ary 885 no tsy manan-kialofana vokatr’io haintrano goavana io.Rava fanana tsy manan-koraisiny ny ankamaroan’ireo traboina, ka miandrandra fanampiana avy amin’ireo tsara sitrapo sy malala-tanana. Hatreto mbola tsy nisy vonjy tonga na dia efa natao avokoa aza ny tatitra miakatra. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 09 septembre 2021 20:03
Fifandraisan-davitra : Misy ny lesoka sy ny tsirambina izay tokony harenina
Nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, tao amin'ny Lapan'i Tsimbazaza, androany tolakandro, ireo mpikambana anatin’ny vaomiera mpanao famotorana mahakasika ny asan’ireo mpandraharaha amin’ny sehatry ny fifandraisan-davitra, tarihin’ny depiote Andriamiasasoa Doda. Nandritra ny valan-dresaka no nilazan’izy ireo fa efa maro ireo mpisehatra nanaovana fanadihadiana toy ny Airtel, Telma, Orange, Blueline… teo ihany koa ny fiaraha-miasa tamin’ny ARTEC sy ireo ministera isan-tsokajiny toy ny fitantanam-bola, ny paositra ary ny varotra.
jeudi, 09 septembre 2021 20:01
Fasintsara – Ifanadiana : Trano 200 tafo kilan’ny afo, 850 ny tsy manan-kialofana
Nitrangana haintrano goavana tao Antanambe Ambatomanjaka, Kaominina ambanivohitr’i Fasintsara, Distrikan’Ifanadiana. Manodidina ny 200 tafo no may, ka mihoatra ny 850 ny isan’ny olona tsy manan-kialofana vokatr’io fahamaizana tanàna io. Nampiantso fivoriana maika teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny Praiminisitra Ntsay Christian, androany, hahafahan’ny fitondram-panjakàna mijery avy hatrany ny fomba hanampiana an’ireo niharam-boina any amin’izany toerana izany.
jeudi, 09 septembre 2021 17:47
RN6 Ambanja - Antsiranana : Hanomboka rahampitso ny fanamboaran-dalana
Hanombohana ofisialy rahampitso zoma 10 Septambra 2021 ny fanamboarana ny ampahany amin’ny lalam-pirenena faha-6, dia eo anelanelan'Ambanja sy Antsiranana. Hotokanana amin’io andro io ihany koa ireo lalana miisa 4 vita ao antampon-tananan'Antsiranana.Hotokanana ny sabotsy 10 Septambra 2021 ny lalana Antsiranana - Ramena. Hisy diabe miainga eo amin'ny "croisement Y" miazo ny morondranomasin'i Ramena amin’io fotoana io. Ho avy any an-toerana hitarika ireo lanonana ireo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 08 septembre 2021 15:09
Kraoma : Nanao naoty ny Tale Jeneraly hamerina ireo mpiasa noroahina
Araka ny baiko nomenan'ny Praiminisitra nandritra ny fihaonany tamin'ny mpiasan'ny Kraoma sy ny Tale Jeneraly vonjy maikan'ny Kraomita Malagasy ny 30 aogositra 2021, dia namoaka naoty, izay navoaka ampahibemaso androany 08 septembre 2021, ny Tale Jeneraly, hamerina ireo mpiasa 35 noroahina, hisian'ny fitoniana eo anivon'ny Orinasa, izay nampanantena ihany koa ny hiara-hiasa ampiroborobo ny Orinasa. Mbola andrasana moa ny vahaolana aroson'ny Tale Jeneraly sy ny Filankevim-pitantanana ny andoavana ny karaman'ny mpiasa miisa 450, izay tsy voaloa nandritra ny roa taona, sy ny fanantanterahana ireo sosokevitra natolotry ny mpiasa hanarenana aingana ny Orinasa. Marihina moa fa manana solotena ao amin'ny Filankevim-pitantanan'i Kraoma ny Ministeran'ny harena ankibon'ny tany, ny Ministeran'ny Vola, ny mpiasa kosa dia tsy manana solotena ao na dia efa niady ny hisian'izany hatrany aza izy ireo.
mercredi, 08 septembre 2021 13:09
Kraoma : Tsy mbola naverina niasa ireo mpiasa noroahina
Mitohy ny ady mangatsiaka eo amin'ny mpiasa sy ny Tale jeneraly vonjy maikan'ny Kraomita malagasy na Kraoma. Herinandro lasa tokoa izay no nifandimby noraisin'i Praiminisitra Ntsay Christian, no sady misahana vonjy maika ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany ny Tale jeneraly vonjy maikan'i KRAOMA, sy ireo solotenan'ny mpiasa, teny Ampandrianomby ny alatsinainy 30 aogositra 2021. Nanome baiko entitra ny Praiminisitra ny amerenana tsy misy atak'andro ireo mpiasa rehetra, sady tsy nandray karama efa ho roa taona, no mbola noroahina tsy ho mpiasa intsony ihany koa. Androany alarobia 08 septambra anefa dia tsy mbola tafaverina, ary tsy nisy taratasy nataon'ny Talen'ny Orinasa miankina amin'ny fanjakana Kraoma mamerina ireo mpiasa hiasa, araka ny baiko entitra nomen'ny Paiminisitra. Etsy ankilany anefa, dia milaza ny Tale Jeneraly vonjy maika, Rakotomanantsoa Nirina, fa efa manamboatra ny simba amin'ny fitaovana nosoparan'ireo mpiasa ny orinasa ankehitriny, ary efa nanao handrana amin'ny milina sy ny kamiao, ary efa vonona hanomboka hiverina ny fitrandrahana karoma ao Brieville. Efa nesorina avokoa ireo sorabaventy nanemotra ny toeram-piasana etsy Ampefiloha, foiben-toeran'ny orinasa.
Page 8 sur 245